War Culus:---Dagaalka ka socda Tukeraq oo wali socda iyo ku dhawaad 50 Askari oo ku dhintay..................................
Posted by xassan on May 15 2018
Dagaalada u dhaxeeya Ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland ayaa wali ka socda deegaanka Tukeraq ee Gobolka SoolWararka ay furimaha ee dagaalka ka helayso Idaacadda Kulmiye ayaa sheegaya in Askar afartan ka badan ay ku dhinteen dagaalada wali ka socda deegaanadaasi.
Wararka aanu helayno waxaa ay sidoo kale sheegayaan in dhaawacu kor u dhaafay boqol askari oo labada dhinacba ah.Dhaawacyada waxaa la kala geeyay magaalooyinka Garoowe, Hargeysa, Burco iyo Oog iyadoo hadda lagu daweynayo Isbitaaladaasi
Askarta dhimatay waxaa ku jira saraakiil Lix kor u dhaafaya oo labada dhinacba ka dhintay Taliyihii ciidanka Somaliland ee Tukeraq Maxamed Daa’uud ayaa la sheegayaa inuu ka mid yahay saraakiisha ku dhintay dagaalka.
Xaalada Isbitaalada la geeyay dhaawacyada ayaa la sheegayaa inay mashquul badan ka jira islamarkaana laga joojiyay dadkii soo booqanayay Taliyaha ciidamada Millatariga Somaliland Nuux Ismaaciil Taani oo ku sugan deegaanka Tukeraq ayaa sheegay in dhaawacyo iyo dhimasho badan ay jiraan labada dhinacba balse aanay warbaahinta u sheegi karin khasaaraha dhabta ah.
Ciidamo maxaabiis ah ayaa labada ciidan kala qabsadeen, waxaana taliyaha Ciidamada Somaliland sheegay in lix gaadhi oo Tigniko ku jirto ay ka qabsadeen kuwa Puntland.
Goobjoogayaal ku sugan Tukaraq oo boqolaal qoys ka barakaceen ayaa sheegay in rasaasta iyo Hubka noocyadiisa kala duwan wali laga maqlayo goobta uu dagaalku ka socda Labada maamulba waxaa ay xoojinayaa ciidamada ku dagaalamaya Tukaraq iyadoo magaalo kasta laga soo daad guraynayo ciidamada Gurmad ah.
Walaac xoogan ayaa laga qabaa in dagaaladu sii socdaan, madaxwaynaha Somaliland ayaa maanta sheegay in lagu soo duulay oo ay dagaalkaasi ka jawaabi doonaan, dhinaca kale Puntland ayaa ku eedeysay Somaliland inay kusoo duuleen deegaanadeeda dagaalkana ay bilaabeen.
Dagaalka ka socda Tukaraq waxay Somaliland ku eedeysay Dowlada Federaalka Soomaaliya Waxaa la xidhay dhamaan waddooyinka la iskaga goosho ee Somaliland iyo Puntland iyadoo loo ogolyahay ciidamada oo kaliya inay maraan wadooyinka Shacabka Gobolka Sool ayaa walaac xoogan ka muujinaya xaalada dagaalada ee sii xumaanaysa.